Igumbi lokulala eliyi-1 kwindlu esemaphandleni ejikelezwe yintlango - I-Airbnb
Igumbi lokulala eliyi-1 kwindlu esemaphandleni ejikelezwe yintlango
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguSunando
ITanhau yindawo yokuhlala yevenkile ekwincopho yenduli kumphakamo oziimitha ezingama-4,200, ejikelezwe lihlathi elishinyeneyo. I-Tanhau inezindlu zeendwendwe ezi-3 zabucala kunye nemibono emangalisayo ejonge amahlathi aseCorbett Tiger Reserve.
Ibekwe kude lee kwezinye iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezingqonge iCorbett, iTanhau ifanelekele iindwendwe ezonwabela ukuva indalo kunye noxolo kude nabanye. Sigxile ngokupheleleyo kulondolozo lwezilwanyana zasendle kwaye sisikelelwe ukonwabela iindidi ezininzi zeentaka kunye nezilwanyana.
UTanhau wazalwa ngenxa yomnqweno wethu wokufumana uxolo lwengqondo kude namahlathi akhonjisiweyo izixeko zethu. Yindawo yokonwabela indalo kunye nezilwanyana zasendle kude nabanye abakhenkethi. Sikwinkqubo engapheliyo yokuhlaziya indlu kunye nommandla ngenjongo yokubuyisela intlango kwakhona.
I-Tanhau, ephezu kweenduli eziphakamileyo, i-Tanhau ijongene namahlathi okugcina i-Corbett Tiger Reserve kunye nomlambo i-Kosi ebetha umoya, kwaye ngokuqinisekileyo iye yabona iindawo ezintle kakhulu kwindawo yeCorbett.
Ngaba ikomityi yeti kaTanhau wonke umntu? Hayi. Ukuba ufuna iholide yosapho eqhelekileyo enengca enobugocigoci, ipuli yokuqubha, i-spa kunye nomculo omkhulu ngokuhlwa, u-Tanhau uza kukuphoxa. Kwelinye icala, ukuba ufuna ithuba lokubona indalo kunye nezilwanyana zasendle ngendlela ezimbalwa, ungabi sakhangela kwenye indawo. Sisikelelwe ukuba sinandiphe iintlobo ezininzi zobomi beentaka nezilwanyana, ezinye zazo zingagqitywanga kwindawo yeCorbett, kwaye siyakuvuyela ukwabelana ngamava ethu nabantu abanomdla.
Sinezindlu ezisemaphandleni zeendwendwe ezintathu kuphela eTanhau njengoko sizama ukwenza ukuhlala kwakho nathi kube ngokobuqu kangangoko kunokwenzeka. Abantu abathandathu bangangena ngokukhululekileyo eTanhau.
I-Tanhau yindawo yokuya engafaniyo nenye kwindawo yeCorbett. Unokuthatha uhambo oluvuyisayo kwindawo yokuhlala ye-tiger emini, wonwabele abantu abenza i-sundowners ngoxa umamele i-alamu ye-sambar deer efowuna kwihlathi elikhulu elingezantsi, utye i-al fresco ngoxa ubala iinkwenkwezi zokudubula esibhakabhakeni sasebusuku; okanye kunoko unokukhetha ukuba wonwabele uxolo kunye nokubona iindawo ezintle ngokufumana incwadi nokutya okumnandi. Izinto esinokukhetha kuzo ziyamandulo, ibe ezinye zezo zahlukile nyhani.
Ithe thaa phezu kwenduli ejonge amahlathi achumileyo aseCorbett Tiger Reserve, iTanhau ikude lee kwinyambalala yabakhenkethi abaqhelekileyo. Ngamanye amaxesha uya kufumana izilwanyana zasendle ezininzi ezijikeleze kuneempawu zabanye abantu! Sigxile kakhulu kwizilwanyana zasendle kunye nolondolozo kwaye sinikezela ngamava awodwa endalo kunye nokuhamba ngeentaka, ukukhempisha kunye neminye imisebenzi ongayi kuyifumana kwenye indawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sunando
ETanhau, sishiya inqanaba lokusebenzisana ukuya kuwe ukuba wenze isigqibo. Ukuba ubumfihlo kunye nexesha lam yile nto uyifunayo, siya kukunika okufanayo. Ukuba kwelinye icala, ukuba unqwenela ukunxibelelana nathi sihlala sivuya ngakumbi ukwabelana nawe ngezinye zezilwanyana zasendle kunye namabali asekuhlaleni.
ETanhau, sishiya inqanaba lokusebenzisana ukuya kuwe ukuba wenze isigqibo. Ukuba ubumfihlo kunye nexesha lam yile nto uyifunayo, siya kukunika okufanayo. Ukuba kwelinye icala, ukub…